WHO oo maanta soo saareysa go'aan la xiriira Fayruska Shiinaha
Madaxa ururka caafimaadka adduunka ee WHO, Tedros Adhanom ayaa sheegay in maanta oo Khamiis ah ay go’aamin doonaan haddii ay ku dhawaaqayaan xaalad caafimaad oo deg deg ah oo calami ah iyo in kale, taas oo ku aaddan faafitaanka Fayrus-ka Corona ee ka dillaacay Shiinaha, kaasi oo dilay 170 qof.
WHO ayaa toddobaadkii tagay sheegtay in dillaaca cudurka uusan gaarin heer cabirka loogu qeexi lahaa xaalada caafimaad oo caalami ah, balse tirada kiiskaska la qaxiijiyey ayaa hadda gaartay 7,711, oo ay ku jiraan 1,700 oo kiis oo cusub oo la shaaciyey Arbacadii.
Tedros ayaa sheegay in 99 boqolkiiba kiisaka dadka uu xanuunka soo ritay laga xaqiijiyay gudaha Shiinaha, 15 dal oo kale caalmka ah ayaa iyagana laga xaqiijiyay ilaa 68 kiis oo Fayrus-ka ah. Marka laga reebo hal qof, dhamaan dhimashada 170 qof ee ka dhalatay xanuunka ayaa ka dhacday magaalada Wuhan ee gobolka Hubei.
Dalal badan oo caalamka oo ay ugu horreeyaan Mareykanka iyo Japan ayaa dadkooda kasoo daadgureeyay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, halkaas oo ah meeshii uu ka billowday faafitaanka Farus-ka Corona.
Waddamada Australia, New Zealand, France, Russia iyo dalal kale ayaa ku dhawaaqay Arbacadii shalay qorshe ay kusoo daad greynayanaan muwaadiniintooda ka jooga magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha.